Kitra – «Total CAF Champions League »: manomboka ny fanazarantena ho an’ ny CNaPS Sports | NewsMada
Kitra – «Total CAF Champions League »: manomboka ny fanazarantena ho an’ ny CNaPS Sports
Efa tafiditra tanteraka amin’ny fanomanan-tena ho fiatrehana ny lalao mandroso amin’ny dingana savaranonando amin’ny fiadiana ny “Total CAF Champions League”, ny CNaPS Sport. Lalao hotanterahina, ny 28 novambra izao, hifandonan’ity ekipa malagasy ity amin’ny Platinium avy any Zimbabwe.
Lalao goavana no miandry ny CNaPS Sport ka mila fanomanana lehibe. Efa nisy ny lalao ara-pirahalahiana maro natao, toy ny fifandonana tamin’ny Tana formation, Cospn ary ny Miara manompo. Ny As Adema kosa no nifanandrina taminy, omaly, teny amin’ny kianja Complexe Vontovorona. Ilaina tokoa ny fifanakalozana traikefa amin’ny ekipa hafa toy izao ho an’ity solontenantsika hiatrika fifaninanana afrikana ity. Tsy maintsy miaritra sy miezaka ny mpilalao tsirairay mba hahitana vokatra, na dia somary hita ho mitaky ihany ary ny havizanana. “Tanjona ny hananana vokatra tsara noho ny tamin’ny taon-dasa. Mbola mila manao fanazarantena mafy, araka izany, na dia efa mitaky aza ny havizanana. Tsy mora rahateo ny lalao miandry ny CNaPS manoloana ny Zimbaboena”, hoy ny fanavazana nentin’ny mpanazatra ny CNaPS Sport, i Tipeh. Marihina fa ny ekipan’ny Zimbabwe no nandrombaka ny Cosafa farany teo ka mitaky ezaka goavana ho an’ny ekipa malagasy izany. Mpilalao efa kalaza avokoa no handrafitra ity ekipa ity, raha ny fantatra.
Raha tsiahivina, misy mpilalao telo mirahalahy nantsoina hanatevi-daharana ity klioba tompondakan’i Madagasikara ity, dia i Ricky sy i Tojo kely avy ao amin’ny Fc Vakinankaratra ary i Yaya Touré kosa izay mpilalao avy amin’ny Ajesaia. Na dia mpilalao vaovao aza izy telo ireo, dia efa hita ho tafiditra tsara ao anatin’ny ekipan’ny CNaPS Sport, raha ny nambaran’ny mpanazatra, Tipeh, hatrany. Hita taratra izany nandritra ny fanazarantena sy fifampivondronana izay efa natao. Ho an’ny omaly izao, niakatra an-kianja izy telo mirahalahy ireo. Ho an’ i Yaya manokana, niaraka tamin’i Kalusha tany amin’ny lohalaharana izy nandritra io fifandonana omaly io. Manantena vokatra tsara avy amin’ity ekipa misolo tena an’i Madagasikara ity, mandritra io fiadiana ny “Total CAF Champions Cup” io, araka izany, ny mpankafy baolina kitra malagasy.